Microsoft Azure ama Windows Azure
Microsoft Azure, mar hore loo yaqaan Windows Azure, waa marxaladda macaamiisha Microsoft ee loo qaybiyo. Waxay bixisaa adeeg baaxad leh, oo ay ku jiraan kuwa sawirka, imtixaanka, kaydinta iyo isku-xirka. Macaamiishu waxay qaadi karaan adeegyadan si ay u abuuraan una cabiraan codsiyada cusub, ama ay ku maamulaan codsiyada jira, guud ahaan bulshada daruuriga ah.
Microsoft Azure waxaa guud ahaan loo arkaa inay yihiin labada Platform sida Adeegga (PaaS) iyo Kaabayaasha sida Adeegga IaaS ee adeegga (IaaS).
Microsoft wuxuu adeegsanayaa adeega Azure ee 11 sheyga hoose:
Compute -Adeegyadani waxay bixiyaan mishiinno fejignaan ah, qaybo, diyaarin isku diyaarin iyo codsi fog fog.
Webka iyo gacanta - Adeegyadani waxay kobcinayaan horumarinta iyo qaabeynta dalabka webka iyo codsiyada la qaadi karo, waxaana intaa dheer bixinta qaybaha maamulka API, digniinta iyo muujinta.
Kaydinta xogta - Qeybintaas waxay ku jirtaa Database inay bixiso adeegyo loogu talagalay SQL iyo NoSQL, iyo waliba wixii aan ku habooneyn ee loo qoondeeyey kaydinta.
Analytics - adeegyadani waxay bixiyaan baaritaanno iyo kaydinta, oo intaa sii dheer baaritaanka socda, baaritaanka xogta weyn, harooyinka xogta, barashada mashiinka iyo keydinta xogta.
Isgaadhsiinta - Kulankan wuxuu ku darayaa shabakadaha farsamada, jaaliyadaha iyo albaabada, iyo sidoo kale adeegyada howlaha firfircoonida, qaabeynta habka hagaajinta iyo habka magac domain (DNS) fududeynta.
Warbaahinta iyo wareejinta naqshadeynta (CDN) - adeegyadani waxay ku dhex jiraan codsi-ku-jajin, cod-celin iyo cayaar daawasho iyo soo-bandhigid.
Iskudhafka Hybrid - kuwani waa adeegyo loogu talagalay xoojinta adeegga, dib u soo celinta goobta iyo iskaashatada khaaska ah iyo kuwa furan.
Maaraynta Aqoonsiga iyo Maamulka (IAM) - Deeqdani waxay dammaanad qaadataa macaamiisha la ogol yahay inay isticmaali karaan adeegyada Azure, oo ay ka caawiyaan keydinta furayaasha furaha iyo xogta kale ee loo qoondeeyey.
Internet of Things (IoT) - adeegyadan waxay ka caawiyaan macaamiisha inay qabtaan, kormeeraan oo ay falanqeeyaan xogta IoT ee ka soo jeeda dareemayaasha iyo qalabka kala duwan.
Maareynta iyo amniga - waxyaabahani waxay ka caawiyaan daruuriyeyaashu inay wax ka qabtaan ururkooda Azure, jadwalka jadwalka iyo shaqooyinka, iyo samaynta robotization. Qodobkani wuxuu isku daraa awoodda iyo kala duwanaanshaha khatarta amniga ee daruuriga ah.
Dhibaatada buuxda ee adeega Azure waxay mar walba ku xiran tahay isbedel. Macaamiishu waa in ay hubiyaan bogga Microsoft Azure si loogu dulqaado.
Sidoo kale waxay la mid yihiin marxaladaha kale ee dariiqa furan, ururrada yaryar waxay adeegsadeen Azure si loo xoojiyo xogta iyo dib u soo kabashada. Intaa waxa dheer, ururo yar yar ayaa adeegsanaya Azure sidii doorasho kale oo ay diiradda u saarayaan xogtooda. Marka laga reebo in kheyraadka la geliyo qolyaha iyo kaydka ku dhow, ururradani waxay leeyihiin dhowr, ama dhammaan, codsiyada ganacsiga ee Azure.
Microsoft bandhigay Azure bishii Oktoobar 2008. Marxaladaha daruuriga ah waxaa markii hore loo yaqaan 'Azure Azure', laakiin waxaa la siiyay Microsoft Azure bishii Abriil 2014. Azure waxay ku tartamayaan marxalado kale oo furan, sida Amazon Web Services (AWS) iyo Platform Platform Cloud.
Si loo damaanad qaado, Microsoft leeyahay Azure xarumaha xogta ku yaalla meelo badan oo ballaaran. Laga soo bilaabo Jannaayo 2016, Microsoft ayaa sheegay in adeegyada Azure ay ka heli karaan xNUMX maxalliga aduunka, oo ku daraya Maraykanka, Europe, Asia, Australia iyo Brazil.